Apple Music Student Discount (2020) - Ahoana ny fomba fampiharana? - Fialam-Boly
Apple Music dia sehatra fandefasana mozika izay mifototra amin'ny famandrihana. Tena mitovy amin'ny sehatra streaming mozika malaza hafa izay fantatra amin'ny hoe Spotify. Manome anao fidirana amin'ny hira mihoatra ny 60 tapitrisa izy ary manana endri-javatra mahatalanjona maromaro ihany koa. Azonao atao koa ny mihaino hira rehefa ivelan'ny Internet ianao, midika izany fa tsy mila mifandray amin'ny WiFi foana ianao. Azonao atao ny mifehy azy amin'ny alàlan'ny Siri ary amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny feo. Apple Music aza manolotra onjam-peo ho an'ny mpampiasa azy.
Apple Music dia tsy mamela anao handefa hira ao anaty katalaog iTunes fotsiny. Saingy, apetrakao ao anaty fizarana iray ihany koa ny mozikao, na novidiana tamin'ny iTunes izy io na alaina avy amin'ny Internet na nalaina tahaka tamin'ny CD aza.
Apple Music Student Discount - Fampahalalana fohy
Apple Music dia nanolotra drafitra ho an'ny mpianatra izay manome fihenam-bidy ho an'ireo mpianatra amin'ny fanomezana azy ireo 50 isan-jato. Natao ho an'ireo niditra an-tsekoly na oniversite izany.
Amin'ny ankapobeny, dia midika izany araka ny Etazonia, izay misy famandrihana manokana an'ny Apple Music izay mitentina $ 9.99 isam-bolana, dia omena $ 4.99 isam-bolana ny drafitry ny mpianatra. Ity drafitra ity dia tsy misy fotsiny any Etazonia, ny mpianatra infact any amin'ny firenen-kafa dia afaka manararaotra an'io drafitra io. Apple Music dia mety ho hafa kely amin'ny tsena hafa. Noho izany, ny vidin'ny drafitry ny mpianatra dia mety miovaova. Fa amin'ny ankapobeny dia ho 50 isan-jato ny vidin'ny famandrihana mahazatra.
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Apple Music dia tsy misy afa-tsy mandritra ny efa-taona, aorian'izay dia hivadika ho drafitra isam-batan'olona. Ny famandrihana Apple Music dia manolotra tombony betsaka amin'ny iTunes ho an'ny mpampiasa azy, mahazo miditra amin'ny katalaogin'i Apple Music iray manontolo ihany koa izy ireo. Hahazo mandingana tsy misy fetra ho an'ny onjam-peo Apple Music ireo mpampiasa ary koa hira tsy voafetra ho an'ny katalaogin'ny Apple Music iray manontolo. Azonao atao ny miditra amin'ny tranomboky novidinao sy noviravirao.
Azonao atao ny mandefa hira izay nakarina tao amin'ny iCloud. Ny zavatra tsara indrindra dia, afaka mamonjy hira ao amin'ny tranombokinao ianao mba hihainoana ivelan'ny Internet.
Ny mpianatra dia mandoa 50 isan-jato kely noho ny famandrihana Apple Music isam-bolana raha ampitahaina amin'ny hafa satria Apple Music manome fihenam-bidy ho an'ny mpianatra.
Ahoana ny fomba ahazoana ny fihenan'ny mpianatra Apple Music?
Apple Music dia mampiasa antoko fahatelo toy ny Unibers hanamarinana ny fisoratana anarana.Ny dingana iray manontolo amin'ny fametrahana ny drafitry ny mpianatra Apple Music hahazoana fihenam-bidy dia tsotra sy mora. Tsy dia maharitra folo na dimy ambin'ny folo minitra akory izany.
Mila ny mailaka an-tsekoly sy ny karatry ny mpianatra ianao.Ianao koa dia mila fomba voamarina fandoavam-bola izay mifandray amin'ny Apple ID.Izy io dia azo aloa amin'ny alàlan'ny carte de crédit, carte debit, na koa ny kaonty PayPal.
Ireto ambany ireto ny dingana hahazoana fihenam-bidy amin'ny Apple Music raha mpianatra ianao.Ny fizotrany manontolo dia mety ho hafa kely arakaraka ny fitaovana ampiasainao, na raha efa nisoratra anarana tamin'ny Apple Music ianao.
Fihenan'ny mpianatra Premium YouTube
Ahoana ny fomba fisoratana anarana amin'ny drafitry ny mpianatra Apple Music (ho an'ireo mpanjifa vaovao):
Sokafy ny Apple Music amin'ny fitaovanao Apple.
Tsindrio ho anao.
Tsindrio ny fitsarana maimaimpoana.
Safidio ny mpianatra.
Peho ny manamarina ny fahamendrehana.
Rehefa mikitika ny fahamendrehana ianao dia hoentina any amin'ny UNiDAYS, izay tranonkala iray hanamarina ny fisoratana anarana amin'ny oniversite. Raha vantany vao voamarina amin'ny alàlan'ny Uniday ianao dia ho afaka handray ny fihenan'ny mpianatra Apple Music.
Eto dia tsy maintsy manana adiresy mailaka '.edu' ianao vao vita io asa io. Aorian'izany dia afaka arahina ireo dingana izay omen'ny UNiDAYS hanamarinana ny kaontinao. Dia izay.
Raha efa nisoratra anarana tamin'ny Apple Music ianao talohan'ny nandehananao tany amin'ny oniversite, ary ankehitriny tianao hivadika izany hahazoana fihenam-bidy ho an'ny mpianatra, azo atao izany koa. Azonao atao ny manova ny kaontinao mora foana.
Ary amin'izany, tsy ho afaka hanandrana maimaimpoana ny Apple Music ianao. Saingy, azonao atao ny mahazo ny famandrihana amin'ny $ 4.99 isam-bolana fa tsy $ 9.99 isam-bolana. Afaka manangona vola be amin'izany ianao.
Ny fanovana ny kaontinao amin'ny drafitra iray mankany amin'ny iray hafa dia miankina amin'ny karazana fitaovana finday ampiasainao. Noho izany, tsara kokoa ny manaraka ireo dingana mety ho an'ny fitaovanao.
Ahoana ny fomba hifindrana amin'ny drafitry ny mpianatra Apple Music amin'ny fitaovana Apple:
Sokafy ny fikirana eo amin'ny fitaovanao.
Tsindrio ny anaranao, avy eo paompy ny Famandrihana.
Tsindrio ny Apple Music Membership.
Kitiho ny mpianatra (1 volana)
Tombontsoa amin'ny fihenan'ny mpianatra Apple Music:
Ny fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Apple Music dia manome anao tombony mitovy amin'ny famandrihana Apple Music tsirairay amin'ny antsasa-bidy.Noho izany, raha mpianatra ianao dia afaka mahazo fe-potoana fitsarana enim-bolana maimaim-poana amin'ny Apple Music, tsy mahagaga ve izany? Ary bonus iray hafa dia, rehefa tapitra ny vanim-potoana fitsapana anao, ny famandrihana Apple Music anao dia ho antsasaky ny vidiny mahazatra izay manodidina ny $ 4.99 isam-bolana amin'ny streaming tsy voafetra!
Raha te hanana drafitra ho an'ny mpianatra Apple Music dia tokony ho mpianatra mianatra amin'ny diplaoma rehetra amin'ny oniversite na oniversite ianao.Manakaiky ny faran'ny taona isan-taona ny famandrihana mpianatra Apple Music dia hahita hafatra izay mangataka anao hanamarina ny satan'ny mpianatrao amin'ny fampiharana Apple Music na iTunes koa ianao. Azonao atao aza ny manafoana ny famandrihana amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ny maha mpianatra anao dia mahazo tombony toa anao koa - afaka mahazo maimaim-poana telo ianaovolana fitsarana ho an'ny Apple TV +. Ianao koa dia mahazo magazay mifantoka amin'ny Fampianarana an'ny Apple raha misoratra anarana amin'ny fihenan'ny mpianatra Apple Music ianao.
Azonao atao ny mampiasa ny Apple Music amin'ny alàlan'ny fitaovana Apple ary koa ny solosaina Windows. Ary, izy io dia miasa tsara amin'ny telefaona Android sy ny takelaka ihany koa. Tsy manana karazana fitakiana fitaovana manokana izy io. Ka na iza na iza dia afaka mahazo fidirana amin'ny Apple Music na inona na inona ampiasain'izy ireo. Ny tokony hataonao rehetra hanombohana manangana kaonty Apple Music dia vita ianao. Apple Music Student Discount dia misy ihany koa any amin'ny firenena 80. Raha vantany vao tapitra ny fihenam-bidy, ny drafitra Apple Music mpianatrao dia lasa famandrihana manokana amin'ny $ 9.99 isam-bolana.
Azonao atao ny mamorona kaonty amin'ny Apple Music izao na amin'ny fotoana rehetra tadiavinao amin'ny dingana vitsivitsy izay nomenay etsy ambony ao anatin'ny minitra vitsy ary hiditra amin'ny mozika tsy manam-petra na dia ivelan'ny Internet aza ianao
Toerana fandefasana sarimihetsika maimaim-poana (2020) tsy misoratra anarana
Daty famoahana She Hulk: Havaozin'ny Mpamorona ve ity taona ity!
Daty famoahana ny Virgin River Season 4: Cast, Plot, Spoilers & Trailer!
ny fomba hijerena sarimihetsika
vonoy ny tranonkala safe mode tumblr
Fampiharana horonantsary vaovao maimaimpoana maimaimpoana
mahita sarimihetsika maimaim-poana alaina
ahoana no ahazoana robux
dia tsy ara-dalàna ny mijery sarimihetsika an-tserasera